HOME > स्थायी निवासी भिसा
永住ビザ　स्थायी निवासी भिसा
धेरै विदेशीहरू हामीलाई स्थायी निवास भिसा बारेमा धेरै प्रश्न सोदछन र सबैभन्दा लोकप्रिय "के मैले स्थायी निवास भिसा प्राप्त गर्न सक्छू?" हो।
धेरै जस्तो विदेशीहरू जान्न चाहन्छनकी उनिहरू स्थायी निवास भिसा प्राप्त गर्न सक्छन वा सक्दैन ।
सम्भव भए धेरै मानिसहरू अहिले भिसा प्राप्त गर्न चाहन्छन् र कति अनुमोदनको लागि मानक कसरी भेट्नु सकिन्छ जान्न चाहने केही मानिसहरू हुन सक्छ ।
स्थायी निवास भिसा प्राप्त गर्न "स्थायी निवास को सही अवस्था" बुझ्न महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
जसले पूरा अावसेक्ताहरु पूरा गर्छन ती विदेशीहरू भिसा प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन्। यदि कुनै अवस्था नमिलेमा आवेदन अस्वीकृत हुनेछ ।
स्वीकृतिको अवस्था सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो ।
जापान बसाई अवधि
तपाईं जापानमा 10 वर्षभन्दा बस्नु भएको छ?10 भन्दा बढी वर्ष लगातार जापानमा बस्यो भने स्थायी निवास भिसाको अवस्था हुन्छ। कोही विदेशीहरु मात्र9वर्ष जापानमा बसेतापनि लागू हुन्छ। तिनीहरूको अवस्था पूरा छैन, त्यसैले आवेदन अस्वीकृत हुनेछ।
जापानमा रहनको अवधि 10 भन्दा बढी हुनू आवश्यक हुन्छ।आवेदन जाँच्न लगभग6महिना लाग्छ।भिषाको लागि लागू गर्दा विदेशीले 10 भन्दा बढी वर्ष लगातार जापानमा बसेको जरुरी हुन्छ।
यसबाहेक, विदेशीले 10 वर्ष भित्र5अधिक वर्षको लागि काम गर्न पनि आवश्यक छ। वर्किङ भिसा लिई कर्मचारीको रूपमा5अधिक वर्ष को लागि काम आवश्यक छ। एउटै कम्पनीमा काम गर्न जरुरी छैन। एक विदेशीले उनको काम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई विभिन्न कम्पनीहरुमा काम सर्तहरू थाप्न सम्भव छ; तथापि, पर्ट टाइम काम थप गर्न सकिँदैन । विदेशले हाल काम परिवर्तन भएको छ भने,आवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ।तसर्थ,हामी तपाईंलाई आफ्नो काम परिवर्तन गरेको एक वर्षपछि भिसको निवेदन दिनसुझाव दिन्छौं।
लगातारको(Continuingly) को मतलब विदेशीले एक समयमा 90 दिन भन्दा बढीका लागि वा एक वर्ष भित्र 150 दिन भन्दा बढी का लागि जापान बाहिर गएको छैन। यदि विदेशी यसो गर्न असफल भएमा, जापान फर्के पछि जापान बसाईको गन्ती पुनः सुरुदेखि गनिन्छ।
जापानी वा स्थायी निवासीका पति/पत्नी 10 वर्ष को लागि जापान बस्नू आवश्यक छैन।
माथि उल्लेखित विदेशीले "3 अधिक वर्षको लागि विवाह र एक वर्ष भन्दा बढी लागि जापान बस्ने गर्नुभए" स्थायी निवास (परमनेन्ट भिसा) को लागि निवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। जापानी वा स्थायी निवासीका पति/पत्नीछ 10 वर्ष को लागि जापान बस्नु पर्ने जरुरी छैन।
वर्तमान भिसा (निवास स्थिति) को बसाइ अवधि3वर्षभन्दा बढी हुनुपर्छ।
भिसा १ वर्ष,३ वर्ष,५ वर्ष का हुन्छन् तर ३ वर्ष माथिको भि सा महत्वपूर्ण हुनसा त्यहाँ अवधि केही प्रकार (एक वर्ष /3वर्ष /5वर्ष / आदि।), र भइरहेको भिसा जसको रहन अवधि3वर्षभन्दा छ लागू लागि आवश्यक छ छन्। एक वर्ष अवधि भिसा छ जो एक विदेशी स्थायी निवास लागि लागू गर्न सक्दैन।
एक विदेशीको पर्याप्त र स्थिर आय हुन आवश्यक छ।बचतको राशि महत्त्वपूर्ण छैन। पर्याप्त वार्षिक आय को मानक कम्तीमा 30,00,000 येन छ। आय 30,00,000 भन्दा कम येन छ भने भिसा प्राप्त गर्न संभावना कम हुन्छ।विदेशीको पर्याप्त आय नभए वार्षिक घरेलू आय स्वीकार्य हुदैन । येदि विदेशीले आफ्नो देशमा रहेका उनको आमाबाबुल/परिवारजनलाई आर्थिक सहयोग पुराउदै आएका छन् भने तत्काल रोक्न सक्नु हुन्छ
त्यहाँ व्यवहार, कर र पेन्सन तिर्ने, स्वास्थ्य बीमा र आपराधिक रेकर्ड भएको/नभएकोले धेरै फरक पर्दछ । अहिले सम्मको सम्पूर्ण जापानी कर तिर्न ,विदेशीका लागि महत्वपुर्ण छ। छैन भने, तपाईंले सबै तिरी निश्चित हुनसक्नुहुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कर बसाइ कर हो।
यदीविदेशीसगँ कम्पनीको स्वास्थ्य बीमा छ भने कुनै पनि समस्या हुदईन ।यदी राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा छ र भुक्तानी गर्न असफल भएका विदेशी, भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमामा, भुक्तान नगरे अनूसार भिसा प्राप्त गर्ने नगर्ने अवस्था हुन्छ।भुक्तानी नभएको कारण विदेशीले भिसा प्राप्त नगरेको अवस्थामा धेरै छन्।
पेन्सनपनि हाल झाँचको अवस्थामा थपिएको छ। पहिला विदेशीले पेन्सन तिर्न पर्दैनथ्यो तर अजभोलि अध्यागमन ब्यूरोमा अक्सर तीन वर्षसम्मको पेन्सन भुक्तानीको प्रमाण पेश गर्न पर्छ।
टृाफीक उल्लङ्घन एक साधारण अपराध हो। एक विदेशीले तीन वा चार पटक ट्राफिक उल्लंघन गर्दा फरक पर्दैन तर तीन वा चार भान्दा अधिक नराम्रो हुनेछ।
ग्यरेन्टर जापानी वा स्थायी निवासी हुनुपर्छ।स्थायी निवासी नभएका विदेशी ग्यारेन्टर बस्न सक्दैन। ग्यरेन्टरको स्थाई जागीर र कर तिरेको हुन आवश्यक छ। जापानी संग विवाह गरेको विदेशीले अफ़नो पति/पत्नीलाई ग्यरेन्टर बस्न अनुरोध गर्न सक्छ ।
永住を取るメリットस्थायी निवास भिसाको लाभ
किन विदेशीहरू स्थायी निवास भिसा प्राप्त गर्न चाहनछन? त्यहाँ केही फाईदा छन्।
सर्बप्रथम, बसाई अवधिमा कुनै रोक हुदैन।.
ज्यादातर वोर्किंग भिसामा अवधि एक वा तीन वर्षको भिसा प्राप्त हुन्छ। तर स्थायी निवास भिसामा विदेशीको भिसा समय तोकिएको हुदैन मतलब उ सधैंभरि जापानमा बाँच्न सक्छ । भिसा नविकरण प्रक्रियाको पनि आवश्यकता पर्दैन । अन्य भिसासंग, तपाई हरेक वर्ष वा हरेक तीन वर्षमा जापान आप्रवासन ब्यूरो जानु पर्ने आवश्यक हुन्छ । जहाँ स्थायी निवास भिसा प्राप्त भएपछि आवश्यक छैन।
・कामको प्रकार विरुद्ध कुनै प्रतिबन्ध छैन।
उदाहरणका लागि, वोर्किंग भिसा भएका विदेशीले उनको मानविकी विशेषज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा, वा कुशल प्राध्यापक आफ्नो क्षेत्र बाहेक काम छनौट गर्न निवास स्थिति द्वारा निर्धारित काम सामग्रीको स्कोप देखि बाहेकका काम गर्न सक्दैन तर स्थायी निवास भिसा भएका विदेशीहरूले जस्तो पनि कम गर्न मिल्छ |
तेस्रो, स्थायी निवास भिसाद्वारा कम्पनीको स्थापना सजिलो बनाउछ ।
स्थायी निवास भिसा नभएका विदेशीले जापानमा एक कम्पनीको स्थापना गर्न चाहने भए व्यापार प्रबन्धक भिसा प्राप्त गर्न जरुरि छ । यसमा धेरै अवस्था हुन्छन जस्तै 50,00,000 येनको लगानी तर स्थायी निवास भिसा भएका विदेशीलाई व्यापार प्रबन्धकको भिसा जरुरि पर्दैन । फलस्वरूप, एक कम्पनी स्थापना गर्न विदेशीक लागि सजिलो हुन्छ ।
・चौथो, एक विदेशी सजिलै बैंक बाट ऋण प्राप्त गर्न सक्छन्।
त्यहाँ धेरै विदेशी छन् जो लामो समय देखि जापान बस्दै आएका छन् र आफ्नै घर किन्न चाहनछन्। स्थायी निवास भिसाले बैंक बाट ऋण प्राप्त गर्न धेरै सजिलो बनाउछ|
पाँचौं, पति/पत्नी र बच्चाहरुलाइ कुनै काममा प्रतिबन्ध हुदैन र "स्थायी निवासी को पति/पत्नी " वा "दीर्घकालीन निवासी" मा भिसा स्थिति परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। येदि पति/पत्नी या बच्चाहरुले स्थायी निवास भिसा प्राप्त गरेमा धेरै फाइदा हुन्छ|
छैटौं, छोडपत्र पछि पनि जापानमा बस्न सम्भव छ
उदाहरणका लागि, जापानी नागरिक भिसा भएका विदेशीले छोडपत्र पछि भिसा नविकरण गर्न सक्दैन ; त्यसैले,निवास स्थिति दीर्घकालीन निवासी भिसामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। स्थायी निवास भिसा भएका विदेशीलाई येसो गर्न जरुरि छैन।
स्थायी निवास भिसाको लाभहरु छन्। हामी लामो समयको लागि जापान बस्न योजना भएका विदेशीलाई स्थायी निवास भिसा प्राप्त गर्न सुझाव दिन्छौं।
永住許可申請のスケジュール स्थायी निवास भिसा लागू गर्ने तालिका
निम्न स्थायी निवास भिसा लागि आवेदन गर्न हाम्रो तालिका यी हून्:
हाम्रो आवेदन प्रकिया स्थायी निवास परमिट आवेदन अनुसार हुन्छ । हाम्रो मद्दत्बाट विदेशीले स्थायी निवासी भिसा प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैले हाम्रो प्रक्रिया बुझ्नू होला ।
सर्वप्रथम हामी तपाई संग परामर्श लिन्छौ र तपाई हरुको पृष्ठभूमि बुझ्न कोसिस गर्छु ; जस्तै कहिले जापान आउनु भयो ?, कस्तो जागिर गर्नु हुन्छ ?, आदि
② विभिन्न कगझाचको प्रस्तुति र संकलन
परामर्श पछि, हामी तपाईंलाई कागजपत्र सङ्कलन गर्न कामका सूची दिन्छौ। आवश्यक कागजहरु प्रत्येक विदेशीका लागि भिन्न हुन्छन्। प्रत्येक विदेशीको अलग राष्ट्रियता, वर्तमान काम र परिवार संरचना रूप अनुसार प्रत्येक अवस्था फरक पर्दछ। त्यसैले हामी परामर्श पछि प्रत्येक विदेशीलाइ सूची दिनछाै।
③ कागजपत्र सङ्कलन
त्यहाँ दुई विकल्प छन् ; आफैलाई द्वारा वा हाम्रो मद्दतले सङ्कलन गर्ने बारे
④ आवश्यक कागजातहरू जस्तै आवेदन फारम, निमन्त्रणा कारण पत्र र कागजातहरू प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ
हामी माथि उल्लेख सारा कागजातको तयारी गर्छौ। समन्येता हाम्रो ग्राहकहरुले कागजातहरू बनाउन पर्दैन । हामी मात्र आवेदन दिन चाहिने कागजातहरू बनाऊदैनौ। हाम्रो ग्राहकहरु स्थायी निवास भिसा को मानक पूरा गर्न सक्ने कागजातहरू बनाऊछौ ।
⑤ निवेदन गर्नु
हाम्रो प्रशासनिक कलमघसीट तपाइको एजेन्टको रूपमा जापान आप्रवासन ब्यूरोमा आवेदन दिनेछौ। तपाईं त्यहाँ जानू पर्दैन।
⑥ एक आवेदन जाँच बारेमा6महिना लाग्छ।
झाचको समयमा जापान अध्यागमन ब्यूरोले विस्तृत व्याख्या वा अधिक विस्तृतको प्रस्टीकरणक कागजातहरू लागि आवेदकसंग सम्पर्क गर्नेछ। हामी यी अवस्थाहरूको पनि हेरचाह गर्नेछौ ।
⑦ परिणामको सूचना
साधारणतया हाम्रो कार्यालय मार्फत भिसाका निवेदन दिने विदेशी स्थायी निवास भिसा प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ।